नेमारका कारण विश्वकपमा १४ मिनेट बर्बाद! सुध्रिएलान् त नेमार? :: PahiloPost
Jul 20, 2019 | ४ साउन २०७६
Jul 20, 2019 | ४ साउन २०७६ Search
नेमारका कारण विश्वकपमा १४ मिनेट बर्बाद! सुध्रिएलान् त नेमार?
6th July 2018, 04:27 pm | २२ असार २०७५
आज राती ११:४५ बजे पाँचपटक विश्वकप उपाधी जितेको ब्राजिलले क्वाटरफाइनल खेलमा बेल्जियमको सामना गर्दैछ। मेसी, रोनाल्डो जस्ता फुटबल स्टारहरु प्रतियोगिताबाट बाहिरिएसँगै उनीहरु जस्तै उत्कृष्ट फुटबलरको सूचिमा रहेका नेमार भने यसपालि धेरै नै चर्चा छन्।
नेमारले आफ्नो टोलीलार्इ रसियामा क्वाटरफाइनलसम्म पुर्‍याउने क्रममा महत्वपूर्ण दुर्इ गोल गरेका छन्। तर नेमारको खेलले भन्दा उनले गरेको अभिनयले यो विश्वकपमा चर्चा पाइरहेको छ। विपक्षी टोलीका खेलाडीले छुने बितिकै नेमारले देखाउने प्रतिक्रयाले यसपालि सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। त्यसैले पनि आजको खेलमा पनि नेमारमाथि फुटबल जगतको नजर रहनेछ।
प्रिक्वाटरफाइनलमा ब्राजिल र मेक्सिकोको खेल सुरुहुनु पूर्व ब्राजिलियन फुटबल स्टार नेमार फुटबल दर्शक माझ खुबै चर्चामा रहेका थिए। उनी आफ्नो खेलले भन्दा विपक्षीको हरेक जसो ट्याकलविरुद्ध मैदानमा लड्दै गरेका दृश्यका कारण नेमारले राम्रो एक्टरको नाम समेत पाए। उनले मेक्सिकोसँगको खेलमा पनि आफ्नो सोही व्यवहार दोहोर्‍याए र आफ्ना आलोचकहरुलार्इ सही सावित गरिदिए।
अन्तिम १६ को खेलमा मेक्सिकोका मिगुल लायुनले नेमारको खुट्टामा हल्का मात्र के छोएका थिए नेमारले मैदानमा अनौठो व्यवहार दिखाए। उनलार्इ गहिरो चोट नै परेको जसरी मैदानमै पल्टिदै बसे। सबैको ध्यान नेमारमाथि गयो।
मेक्सिकोका खेलाडी, रेफ्री, एसिस्टेन्ट रेफ्री, दर्शक सबै जनाको ध्यान नेमार माथि पुग्यो। तर भिडियो रिप्लेबाट सिधै देखिन्थो कि उनले नाटक गरेका हुन्। लगातार चार खेलमा नेमारले देखाएको व्यवहारमाथि धेरै व्यङ्ग हुन थाल्यो। मेक्सिकोको खेलमा त ब्राजिलका समर्थकहरुले नै नेमारले राम्रो खेले पनि अति गरेको भन्न भ्याए।
खेल सकिएपछि संसारभर नेमारको उक्त हर्कतका सन्दर्भमा स्ट्याटस, ट्रोल, भिडियो बने। मेक्सिकन फुटबल समर्थकहरुले त आफैँ सडकमा पल्टिएको भिडियो बनाउँदै नेमारलार्इ गिज्याए।
ब्राजिलियन पत्रिका ग्लोबोले ‘नेइमार ह्याज चार्मड ब्राजिल, बट एनोइड होल वर्ल्ड’ (नेमारले ब्राजिललार्इ खुसी बनाए, तर संसारलार्इ रिस उठाए) भन्ने शीर्षकमा समाचार छाप्यो। उक्त समाचारमा नेमार लडेको तस्विरसहित नेमारले ब्राजिलका लागि राम्रो खेले पनि उनको व्यवहारले संसारभरमा फुटबल दर्शकलार्इ आक्रोशित बनाएको उल्लेख गरिएको थियो।
मेक्सिकोका प्रशिक्षक जुयान कार्लोसले नेमारले मैदान प्रदर्शन गरेको 'अभिनय फुटबलका लागि राम्रो उदाहरण नभएको' प्रतिक्रिया दिएका थिए।
स्विस ब्रोडकास्टर आरटिइसका अनुसार नेमारले फिफा विश्वकपमा ब्रजिल खेलेको खेलमा फल अपिल गरि लगभग १४ मिनेट बर्बाद गरेका छन्। मेक्सिकोसँगको खेलमा मात्र नेमारले ५ मिनेट २९ सेकेन्ड खेर फालेका थिए। मिगुल लायुनले ७१ मिनेटमा नेमारको खुट्टामा हल्का छुँदा उनका कारणले पुरै दुर्इ मिनेट खेल रोकेको थियो। नेमारका कारण सर्बियासँगको खेलमा १ मिनेट ५६ सेकेन्ड, स्विटजरल्याण्डसँगको खेलमा ३ मिनेट ४० सेकेन्ड समय खेर गएको थियो। आरटिइसले नेमारकै कारण खेर गएको समयको अध्ययन गरेको हो।
पेरिस सेन्ट-जर्मनबाट व्यवसाहिक फुटबल खेल्ने नेमार विश्वकै सर्वाधिक महँगा खेलाडी हुन्। तर आफूले नै आफ्नो खेललार्इ छाँयामा पार्दै हिडेका नेमारमाथि आफूलार्इ अब्बल सावित गर्न दबाब रहने नै छ। यसका साथै बेल्जियमसँगको खेलमा विश्पकप जित्ने लक्ष्यलार्इ साकार बनाउन मैदानमा उत्रने नेमारका अगाडी अर्को एउटा चुनौती रहनेछ, त्यो हो आफ्नो बानि सुधार्ने र विश्व फुटबललार्इ खुसी बनाउने।
नेमारका कारण विश्वकपमा १४ मिनेट बर्बाद! सुध्रिएलान् त नेमार? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
प्रहरीले काँधमा अर्का प्रहरीलाई बोकेर उद्दार गरेको भाइरल फोटो: के भएको थियो?
एक युवतीको डरले यसरी गुम्यो मेरो दश रुपैयाँ
शीतल निवासको कार्यक्रमले तताउँदै सामाजिक सञ्जाल : घरमा नाच्न करिश्माको अस्विकारदेखि सरोज खनालको 'कमोडासन'सम्म
हिउँदमा चलाइने टर्वाइन असारमै घुम्यो : कुलेखानी भरिँदा भारतबाट आयात हुने विद्युत आपूर्ति घटाइयो
टी-२० विश्वकप एसिया फाइनल क्वालिफायर खेल्ने चार प्रतिद्वन्द्वीसँग नेपालको 'हेड टु हेड'
प्रम ओलीका पहिलो विदेशी पाहुना शाहीद खाकन अब्बासी पक्राउको भित्री कारण यस्तो
हुँदै नभएको ६१ करोडमा नाम जोडेर सरकार नै मविरुद्ध लाग्यो : मोहन बस्नेत